Wenger: Cadaadis Badan ayaa iga haysta Arsenal
HomeWararka MaantaWenger: Cadaadis Badan ayaa iga haysta Arsenal
Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal, ayaa ka hadlay cadaadiska saaran kooxdiisa xili ciyaareedkan, khaasatan mid isaga dusha laga saaray oo ah in uu ku khasbo kooxdiisa in ay guuleystaan kulan kasta.
65 jirkan oo ka hadlayay ka hor ciyaarta maanta dhex maraysa ERverton ayaa waxa uu dib u milicsaday guul-darradii Champions League ka soo gaadhay kooxdiisa, waxaanu tilmaamay in kulanka maanta ay iska maydhi doonaan ceebtii dusha laga saaray Arbacadii.
“Waxa i saaran cadaadis la mid ah ka tababareyaasha kale uun, waxaanan rabaa in aan ku guuleysto ciyaaraha kubadda cagta waase niyad jab weyn marka ay Monoco kuugu timaado garoonkaaga ee aadan ka guuleysanin laakiin waa qayb ciyaarta ka mid ah” sidaas ayuu yidhi Wenger.
“Waa run in afartii sannadood ee la soo dhaafay aanaan u gudbin rubuc-dhamaadka (quarter final) Champions League, waana sababta ay natiijada Arbacadii niyad jabka u keentay. cid waliba way naga soo horjeedday, xattaa habeenka laftiisa ayaa naga soo horjeeday, ciyaarta ayayse ka mid tahay” ayuu raaciyey.
Arsenal waxa ay maanta garoonkeeda Emirates ku martigelinaysaa Everton, waxaana kooxda tababare Wenger waajib ku ah in ay badiyaan si ay kaalinta saddexaad ugula tartami karaan Manchester United oo hal dhibic ka sarrayn doonta haddii ay kulanka maanta badiso Arsenal.
Tababare Wenger waxa uu aaminsan yahay in aan wali la gaadhin xili laga hadlo kaalinta ay kooxdiisu horyaalka ka geli doonto.
“ciyaaro adag ayaa noo hadhsan, marka la isbarbar dhigo kulamada aanu garoonkayaga ku ciyaarnay iyo kuwa dibeddana waxa laba ciyaarood dheer kuwa aanu dibedda ku ciyaarnay horyaalka Premier League, markaa waa lama huraan in aanu ku guuleysano gurigayaga. Dareenka aanu maanta ku jawaabaynaana waa mid kacsan, laakiin noloshu hoos u dhac iyo kor u kacbay way leedahay” ayuu yidhi Wenger.
Muslim Mise Gaal: Ozil Oo Ey Dariiqyada Jiidanaya
Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor ÖZET
Barcelona 1-0 Valencia, Copa del Rey semi-final Highlights